Jumbo Crayfish ntụ ntụ ntụ 1Kg | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Jumbo Crayfish ntụ ntụ ntụ 1Kg– Ordrs
Jumbo Crayfish ntụ ntụ ntụ 1Kg
Jumbo Crayfish Stock - Bouillon de Poulet (Halal) - 1kg --- Otu n’ime Ngwunye Ahịa Akụrụngwa Kachasị ewu ewu. Jiri efere crayfish kacha mma dịkwuo mma na efere gị. Mfe iji na igbari. Echefula iwelata nnu nnu ị na-emebu: ngwaahịa Jumbo gị enyelarị nnu. - Ngwongwo a na - acha uhie uhie bu ezigbo ekpomeekpo maka nri ma nwee ike igbari ya n’ime mmiri iji mee broth dị ụtọ. A nnukwu isi maka a dum iche iche nke efere na staple maka ihe ọ bụla kichin ụlọ ahịa kọbọd.